Connoles Gatehouse ngaseLwandle
IConnoles Gatehouse ngaseLwandle....yindlu entsha kraca yeLUXURY enebhedi enye ebekwe kwiWild Atlantic Way. I-"Gatehouse ngaseLwandle" yethu yindawo emangalisayo eyakhiwe ngamatye asekuhlaleni abekwe phantsi kwentaba ejongene neGalway Bay, iAran Islands kunye neeNtaba zeConnemara. Indawo yayo emangalisayo ejonge uLwandle, yenza le Cottage ibe sisiseko esifanelekileyo sokuphonononga iFanore entle kunye neelwandle zayo ezingangcoliswanga, iBurren, Cliffs of Moher, Lahinch & Irelands traditional Music Capital-Doolin.
Njengoko unokubona kwimifanekiso uya konakaliswa kule ndawo imangalisayo, yabucala & ezolileyo.
Uphononongo luthetha ngokwalo!
Ilungele abantu ababini .... le Cottage yodidi yenziwe yi-en-suite yokulala enye (enebhedi enkulu) kunye nekhitshi / indawo yokuhlala. Zonke iifestile kunye neengcango ziqhayisa iimbono zolwandle ezimangalisayo. Ekuphela kwento umntu ayibonayo kumandlalo wabo lulwandle
Isidlo sangokuhlwa kunye nesidlo sasemini esipakishiweyo (esidumileyo kubahambi) sinokubonelelwa ngesicelo sangaphambili. Nceda thumela umyalezo kumnini ukuba ajonge kuqala ukufumaneka kunye namaxabiso. Enkosi.
4.98 ·Izimvo eziyi-197
4.98 · Izimvo eziyi-197
IFanore yilali ebukekayo eselunxwemeni kwi-Wild Atlantic Way. Inolwandle olunomtsalane olunesanti, i-pub, icawa kunye nevenkile. Ineendlela ezininzi eziluhlaza ezimangalisayo ezithandwa kakhulu ngabahambi. Yimizuzu eyi-15 kuphela ukusuka eDoolin eyiCaptial yeMveli yoMculo yaseIreland kunye neDoolin Pier apho umntu unokubamba isikhephe ukuya kwiZiqithi zeAran.
Iindlela zokuhamba ezimangalisayo zeGreen Green ukuze uphonononge.
Isikolo seAloha Surf sabathanda ukusefa ngokunjalo nabaqalayo